Nyaya yeKuvandudzwa kweBumbiro reMitemo Yopinda Mudare neChina
Kukadzi 04, 2009
Nhengo dzedare reHouse of Assembly neSeneti dzanzi dziuye kudare neChina. Matare maviri aya ari kutarisirwa kutanga kuzeya nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kana kuti Constitutional Amendment Number 19.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vari kutungamira nhaurirano pakati peMDC neZanu PF vari muPretoria pari zvino vanenge vange vabvumirana pane zvanga zvichinetsa panyaya yekugovanwa zvakafanira kwemagavhuna uye kuvandudza bumbiro remitemo zvakare, kuburikidza nekudzikwa kwemutemo weNational Security Council mubumbiro remitemo. Kana mutemo uyu ukadzikwa unenge ichizoona mashandiro emapurisa, mauto nevamwe vose vanochengetedza nyika.
NeChipiri, gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, avo vari kutungamira Zanu-PF munhaurirano dziri kuitwa kuSouth Africa, vaimbenge vati bhiri iri richazeyiwa svondo rinouya. Asi izvi zvazoshandurwa neChitatu.
VaJoram Gumbo ndivo Chief whip veZanu-PF mudare reHouse of Assembly. VaGumbo vaudza Blessing Zulu weStudio7 kuti vane chivimbo kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka.
Chief whip weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaInnocent Gonese, vanoti kuumbwa kwehurumende uku kuri kutora nguva sezvo Zanu PF iri kutsikatsika madziro pazvinhu zvinofanirwa kugadziriswa.